ⓘ စတီဖင် အမ်မဲလ်
စတီဖင် အာဒံ အမ်မဲလ် | Stephen Adam Amell သည် ကနေဒါလူမျိုး သရုပ်ဆောင် နှင့် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ The CW တွင် ပြသနေသည့် စူပါဟီးရိုး ဇာတ်လမ်းတွဲ Arrow တွင် အိုလီဗာ ကွင်း / အစိမ်းရောင် လေးညှို့ရှင် အနေဖြင့် ထင်ရှားသူဖြစ်ပြီး Arrowverse ၏ ဖခင် ဖြစ်သည်။ သူသည် ရာသက်ပန် ကြေးစားနပန်း ပရိတ်သတ် အနေဖြင့် အဓိက ကြေးစားနပန်းပြိုင်ပွဲများတွင် မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် WWE ပွဲ၊ ၂၀၁၇ တွင် Ring of Honor ပွဲများတွင် အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အမြဲတမ်းရှိသည့် Bullet Club တွင် ပါဝင်ခြင်း နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် The Elite တို့တွင် ဖြစ်သည်။
1. ဘဝ အစပိုင်း
အမ်မဲလ်ကို မေလ 8, 1981 မွေးဖွားခဲ့သည် အတွက် တိုရွန်တို၊ အွန်၊ စန်ဒရာအန်း Bolt နှင့်သောမတ်စ်ဂျေအမ်မဲလ် ၏သား။ သူသည်သရုပ်ဆောင်ရော် ဘီအမဲလ် ၏ပထမဆုံးဝမ်းကွဲဖြစ်သည်။
သူသည် St. Andrews College ၊ ယောက်ျားလေးများအတွက် သီးခြားလွတ်လပ်သောကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အမ်မဲလ် သည် Queer ၏ စတုတ္ထရာသီဖြစ် သည့် Folk အဖြစ် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Liberty Ride spinning instructor အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သည်။ အမ်မဲလ် သည် Dantes Cove ရုပ်မြင်သံကြား ပထမရာသီတွင် အာဒံကိုကစားခဲ့သည်။ သူသည်ဒုတိယရာသီတွင် Jon Fleming နှင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ တွင်သူသည် ReGenesis တွင် Gemini ဆုကိုရရှိခဲ့သည် ။ ထိုနှစ်တွင်ပင် သူသည် Rent-a-Goalie အတွက် အကောင်းဆုံး Ensemble Cast အမျိုးအစားတွင် Gemini ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
My Hair and Heartland ရှိ ဇာတ်လမ်းတွဲ Da Kink တွင် သူသည် အခန်း ကဏ္ဍ rec မှ ထပ်မံပါဝင်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ 3, 2010 တွင်, အမ်မဲလ် ၏ သွန်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ယင်း Vampire Diaries ရာသီ ၂ အဘို့အဝံပုလွေ Brady အဖြစ်
အမ်မဲလ်သည် မူလက ၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလတွင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့် Lifetime ရုပ်ရှင် Justice for Natalee Holloway တွင် အစစ်အမှန်ဘဝ ရာဇဝတ်ဇာတ်ကောင် Joran van der Sloot အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
On October 2, 2011, season3of HBOs series Hung premiered with Amell starring as busboy-turned-prostitute Jason,ayounger rival "ho" to Thomas Janes Ray Drecker. He also appeared as Jim in the fourth season of 90210.
Amell announced on October 28, 2011, that he had just finished filming the Christmas episode of New Girl with Zooey Deschanel and Max Greenfield. He touches on the experience of filming his first "network half-hour comedy" in an interview with Daemons TV. On November 9, 2011, Amell was announced for the recurring role of Scottie,aparamedic on ABCs Private Practice. He also played the role of Travis McKenna in Blue Mountain State
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် အမ်မဲလ်သည် DC Comics စူပါဟီးရိုးကို အခြေခံသည့် The CW စီးရီး Arrow တွင် Green Arrow အမည်ရှိ Oliver Queen အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဤဇာတ်လမ်းတွဲနှင့် ဇာတ်ကောင်ကြောင့် အမ်မဲလ်သည် Flash, Legends of Tomorrow နှင့် Supergirl ကဲ့သို့သော ဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့် CW Seed webseries Vixen ကဲ့သို့သောကွန်ရက်ရှိ အခြားစူပါဟီးရိုးစီးရီးများ၌ Arrowverse ၏ ကြီးထွားမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
အမ်မဲလ်သည် ကေစီဂျုံးစ် အဖြစ် ၂၀၁၆ ဇွန် ၃ ရက်တွင် ဖြန့်ချိခဲ့သော Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of Shadows ရုပ်ရှင်တွင် တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အမ်မဲလ်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလတွင် American Ninja Warrior ၏ အထူးသီးသန့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
In 2017, Amell took part in the directorial debut of former Heartland co-star Michelle Morgan,ashort film entitled Mi Madre, My Father, playing the estranged father ofasix-year-old girl. Morgan raised funds for the production throughacrowdfunding campaign. အဆိုပါရုပ်ရှင်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် Cannes Film Festival တွင် ပြသခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလတွင် အမ်မဲလ်သည် Arrow ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ အဆုံးသတ်ဖြစ်သော အဋ္ဌမမြောက်နှင့်နောက်ဆုံး ရာသီကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ထုတ်လွှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ His first post- Arrow project was announced the following August: Heels,aStarz drama series set in the world of independent professional wrestling.
3. ကြေးစား နပန်း
All In ၂၀၁၈
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင် သူသည် သူ၏ ပထမဆုံးအကြိမ် တစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲကို All In တွင် ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုပွဲတွင် Christopher Daniels ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။
3.1. ကြေးစား နပန်း WWE ၂၀၁၅
ကြေးစားနပန်း ပရိတ်သတ်တစ်ဦး အနေဖြင့် Amell သည် WWE ၏ အပတ်စဉ် Raw အစီအစဉ်တွင် ဧည့်သည်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မေလတွင် သူသည် ဩဂုတ်လအတွင်း WWE ၏ pay-per-view SummerSlam တွင် Stardust Cody Rhodes ကို နပန်းလုံးရန် ကြံစည်ထားကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့သည်။ Amell သည် သူ၏ပထမဆုံး WWE ပါဝင်မှုကို မေလ ၂၅ ရက် Raw ဇာတ်လမ်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သူသည် Stardust နှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ Amell သည် ဩဂုတ်လအစောပိုင်းတွင် Raw သို့ ပြန်သွားသည်။ ပရိတ်သတ်များကြားတွင် Stardust ၏ တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရပြီးနောက် Amell သည် လုံခြုံရေး ဝင်မထိန်းသိမ်းမီအထိ သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ရန် ကြိုးဝိုင်းအတွင်းသို့ဝင်သွားခဲ့သည်။ Triple H နှင့် နောက်ခံဇာတ်ကွက်အပြီးတွင် Neville သည် SummerSlam ၌ Stardust နှင့် King Barrett တို့ဖြင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံရန် Amell နှင့်ပူးပေါင်းမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ ၂၀၁၅၊ ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်တွင် Amell နဲ့ Neville တို့သည် Barrett နဲ့ Stardust ကို အသင်း-အသင်းပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့ သည်။ Amell သည် နပန်းပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး နောက်ကွယ်တွင် နပန်းသမားများသည် Amell ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သဘောကျသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ Amell သည် Rhodes နှင့် မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Arrow တွင် သူ အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Amell သည် ပွဲစဉ်အတွင်း Stardust ပေါ်သို့ သူ၏ ခုန်ချမှုအတွက် "Celebrity Moment of the Year" အဖြစ် Slammy ဆုကို ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
3.2. ကြေးစား နပန်း Ring of Honor ၂၀၁၇
Amell returned to professional wrestling for Ring of Honor on November 17, 2017, at Survival of the Fittest. On the day of the show, Amell joined the Bullet Club faction, and teamed with Cody Rhodes, Kenny Omega, and The Young Bucks Matt and Nick Jackson inafive-on-four tag team match. They defeated The Addiction Christopher Daniels and Frankie Kazarian, Flip Gordon, and Scorpio Sky, and Amell again participated in the wrestling, including being put throughatable by The Addiction.
Amell သည်လူသိများသောလူသိများသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်သည့် Represent.com မှတစ်ဆင့်အောင်မြင်သောရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Amell သည် Fuck Cancer နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးဒေါ်လာသန်းတစ်သောင်းနီးပါးကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ မျက်နှာတွင်ရှေ့မျက်နှာ၌ပါသည့်တီရှပ် သူ၏နဖူးတွင် Post-it note ဖြင့်ဖော်ပြခြင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်း၏အမည်ကိုဖော်ပြခြင်း ဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။ သူကဒီကင်ပိန်းကနေရှပ်အင်္ကျီပေါင်း ၆၀,၀၀၀ ကျော်ရောင်းခဲ့တယ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် Amell သည် Paws နှင့် Stripes နှင့် Stand For The Silent တို့၏စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေရန်သူ စိတ်ရင်းစေတနာ ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သောသူ၏စကားလုံးကိုပြသသည့်သူ၏ဒုတိယ Represent.com ကင်ပိန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် Amell သည်သူ၏ WWE Raw တွင် Stardust နှင့်အတူ appearance ည့်သည်အဖြစ်အပျက်ကိုသုံးကာတိုရွန်တိုရှိကလေးဆေးရုံ Emilys House အတွက်တတိယအကြိမ်မြောက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းဖြင့်ရန်ပုံငွေရှာဖွေခဲ့သည်။ ကင်ပိန်းကဒေါ်လာသန်း ၃၀၀,၀၀၀ ရခဲ့ပြီး Amell နဲ့ Stardust ဟာချက်ချင်းပဲ Emilys House မှာချက်လက်မှတ်တစ်စောင်ပေးတယ်။ အနီရောင်နှာခေါင်းနေ့အထူး အမေရိကန် Ninja Warrior တွင် Amell သည်အတားအဆီး ၆ ခုစလုံးကိုပြီးစီးရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၃၅၀၀၀ နှင့်အပိုအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သော Salmon Ladder ကိုလှူဒါန်းခဲ့သည်။
Amell သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်တွင် တိုရွန်တို၌ သူ၏ပထမဆုံးဇနီးဖြစ်သူ ကနေဒါကယ်ရိုလင်းလောရင့်ကို လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ကွာရှင်းခဲ့သည်။ Amell သည် မော်ဒယ်မင်းသမီး Cassandra Jean ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် သီးသန့်အခမ်းအနားဖြင့် ကာရစ်ဘီယံတွင် လပ်ထပ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် New Orleans တွင် မေလ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဇနီးမောင်နှံသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် သမီးလေးတစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။
Wikipedia: စတီဖင် အမ်မဲလ်